စီႏြန္ ဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံ သို့ ျပန္သြားတဲ့ အေပၚ အႏုပညာသမား အခ်ိဳ့ ျပစ္တင္ ေဝဖန္…. – Real News
စီႏြန္ ဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံ သို့ ျပန္သြားတဲ့ အေပၚ အႏုပညာသမား အခ်ိဳ့ ျပစ္တင္ ေဝဖန္….
စီနွန် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ သို့ ပြန်သွားတဲ့ အပေါ် အနုပညာသမား အချို့ ပြစ်တင် ဝေဖန်
မင်္ဂလာပါ ပရိတ်သတ်ကြီး တို့ရေ စီနွန်ဟာ သူ့ရဲ့ နေရပ် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ သို့ လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းလောက်က ပြန်သွား ခဲ့ပါပြီ။ ဒီလို သူ့နိုင်ငံသို့ ပြန်သွား ခဲ့တဲ့ အပေါ်ကို အနုပညာ သမား အချို့က ဝေဖန် ပြောဆို လျက်ရှိပါတယ်။
“ဒီ Foreigner Chauk မကို ကလော်ချင်တာ ၂ခါ ကြိုးစားဖူးတယ်။ ရေးလိုက် ဖျက်လိုက်နဲ့။ ထုံးစံအတိုင်း မနာလိုလို့ ​ရေးတယ်လို့ အစော်ကားမခံနိုင်လို့ အဖက်မလုပ်ခဲ့တာ။ အခုတော့ စပ်ချင်တဲ့သူစပ်။
တခြားနိုင်ငံက Gay တစ်ယောက် မြန်မာဝတ်စုံတွေဝတ်ပြပြီး Catwalk လျှောက်တာအထိ လက်ခံပါတယ်။ သူ့ကိုကိုယ်သူ Branding လုပ် ပရဟိတနဲ့ Promotion လုပ်တိုင်း အနုပညာသမားမှ မဟုတ်တာ။
သူ့မှာ ဘာအနုပညာမှ မရှိဘူးနော်။ သူ့လို ဝတ်စားပြီး လျှောက်သွားနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား A Chauk တွေမှ ရိုက်သတ်လို့ မကုန်ဘူးနော် ။
မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေက နိုင်ငံခြားသားဆို ပိုအထင်ကြီးတဲ့ရောဂါက အမြစ်စွဲနေတာ။ ကိုယ့်အချင်းချင်းဆို $ Chauk Ma လို့ပဲ ဆဲချင်တာ။
ပိုအဆိုးဆုံးက FB influencer ဆိုပြီး ခေါင်းထဲ ရိုက်သွင်းခံထားရတဲ့ Brand တချို့ Manager တချို့ပဲ။ ဘာအနုပညာသမားမှ မဟုတ်တဲ့ အဲဒီ A Chauk Ma ပွဲတစ်ပွဲတက်ရင် ယူတဲ့ Fees က မတော်မတရားယူလည်း ပေးကြတာကို ရင်နာလို့မဆုံးဘူး ။
ခင်ဗျားတို့ အရမ်းချစ်ခဲ့တဲ့ အရမ်းအားပေးခဲ့တဲ့ လမ်းဘေးမှာ ဒေါက်ဖိနပ်စီးပြတဲ့ လူလည် A Chuak Ma တစ်ယောက် အခုတော့ စီးပွားပျက်တာနဲ့ သူ့နိုင်ငံသူ သိန်းရာချီပိုက်ပြီး ပြန်ပြေးပြီလေ။”
ဒီစာကို အရင်က မြန်မာရုပ်ရှင် ဗီဒီယို ဇာတ်ကား တွေမှာ ဇာတ်ပို့ကောင်းတစ်ယောက် အနေနဲ့ သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး အခု နောက်ပိုင်းမှာတော့ အစီစဉ် တင်ဆက် သူ အနေနဲ့ တွေ့လာရတဲ့ ကိုစွမ်းထက်အောင် (အစည်)မှ သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာကနေ ရေးသားခဲ့တာပါ။
အနုပညာရှင် အချို့ ဂီတ အနုပညာ အချို့မှ လဲ ပြစ်တင် ဝေဖန်ပြီး မှတ်ချက် ပေးထား ခဲ့တာတွေကိုလဲ တွေ့ရှိရပါသေးတယ်
စီနွန်ဟာတော့သူ့ရဲ့ နိုင်ငံကို ပြန်ရောက် တည်းက မြန်မာနိုင်ငံ အတွက် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ကြိုးစားပေး လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ပရိတ်သတ်ကြီးလဲ စီနွန်အပေါ် မြင်တဲ့ အချက်လေးတွေကို ပြောသ‌ွားပေးခဲ့ကြဦးနော်။ ဖတ်ရှုအား ပေးခဲ့ကြတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီး အားလုံး သာယာသော နေ့ရက်များ ပိုင် ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။ Source ; Swam Htet Aung
အရမ္းခ်စ္ရတဲ့ သူ႔ရဲ့သားေလး ႏွစ္ေယာက္ကို အရမ္းလြမ္း ေနေၾကာင္း ရင္ဖြင့္စကား ေရးသား လာခဲ့တဲ့ ကိုေပါက္